Frances Perry House ho an'ny daholobe sa tsy miankina? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Frances perry - mamaly ireo fanontaniana
Frances perry - mamaly ireo fanontaniana
Frances Perry House ho an'ny daholobe sa tsy miankina?
Frances Perry Housedia tompon'andraikitra amin'ny Ramsay Health Care - aampahibemasoorinasa voatanisa. Ramsay Health Care no lehibe indrindra sy hajaina indrindramanokanampiasan'ny hopitaly ao amin'ny firenena.
Tena tokony adikao daholo ve ireo kopia telo eto, eto, ary eto, Stan? Voalazan'ny lalàna ve izany? Tsara izany. Nihomehy fotsiny aho.
Tsy mila mameno endrika telo sosona aho mba handefasana horonantsary Crash Course, saingy izany karazan-javatra izany no iray amin'ireo antony lehibe tsy itiavan'ny olona ny kasety mena. Ny Amerikanina dia mirona mampifangaro azy ireo amin'ny lalàna tsy takatry ny saina sy ny fomba fandaniam-potoana, ary angamba manelingelina indrindra - birao tena izy. Saingy ny biraon'ny birao dia mitovy amin'ny fianakavianay lehibe, satria isika amin'ny ankamaroan'ny ampahany dia tsy mahatakatra na farafaharatsiny tsy mankasitraka ny anjara asa lehibe ataon'ny birao eo amin'ny fiainantsika, indrindra noho ny endrika rehetra ary satria ny zanak'olo-mpianadahy dia mitazona foana ny cookies rehetra. ny siny ao amin'i Bebe.
Inona marina no atao hoe birao? Halako ny manao an'io satria miavonavona sy kamo aho, fa indraindray manampy ny mijery diksionera rehefa manandrana mamantatra ny dikan'ny teny iray. Ity misy famaritana siansa politika mahasoa: 'Ny birao dia rafitra sarotra amin'ny birao, asa, fitsipika ary fitsipiky ny fandaminana izay ampiasain'ny andrim-panjakana lehibe handrindrana ny asan'ny mpiasa ao aminy.' Teboka roa no tokony hohamafisina eto: Amin'ny lafiny iray, ny birao dia misy manam-pahaizana izay mazàna mahalala bebe kokoa ny lohahevitra resahina mihoatra ny azonao ary afaka mizara asa sarotra amin'ny fomba iray ahafahana mamita azy ireo.
Faharoa, mampiasa birao ny andrim-panjakana lehibe rehetra, ka ny tsy fitoviana eo amin'ny orinasa lehibe sy ny governemanta lehibe dia diso, farafaharatsiny amin'ity lafiny ity, na ilay tiako hiantsoana hoe dichotomy diso. Sahisahy loatra ve izany milaza 'dichotomy diso', Stan? Tsy raharahako, hoy aho. Dichotomy diso! Ka raha mankahala ny mena mena ny olona ary mampitaha azy amin'ny Google sy Amazon, maninona isika no manana azy ireo? Ny antony lehibe mahatonga izany dia ny fahombiazan'ny birao.
Manamora ny famitan'ny governemanta haingana ny raharaha izy ireo ary, amin'ny ankapobeny, miasa amin'ny rehetra. Any Etazonia, ny birao federaly dia manatanteraka andraikitra lehibe manokana. Voalohany, ny birao dia mampihatra ny lalàna nosoratan'ny Kongresy.
Efa namaky lalàna ve ianao? Sarotra izy ireo. Tsara raha manana manam-pahaizana afaka mandika azy ireo sy mametraka azy ireo am-perinasa. Faharoa, ny birao dia manamboatra sy mampihatra ny lalàny manokana ihany koa.
Saingy tsy maherifo amin'ny hetsika izany raha ny fahitana azy. Ary fahatelo, mamaha ny fifanolanana izy ireo amin'ny alàlan'ny dingana iray antsoina hoe fahefana ara-pitantanana, izay mahatonga azy ireo ho mpitsara. Fantatro izao fa nanaraka tamim-pitandremana ireo fizarana rehetra ireo ianao, fantatrao fa farafahakeliny roa amin'ireo fiasa ireo no manana olana amin'ny fomba mihoatra ny fanaovana lalàna miseho Byzantine, na adala, na izy roa - Byzantupid.
Ny olana lehibe eto dia ny fisarahan'ny fahefana, izay tadidinao fa ny fahefana dia mizara roa amin'ireo rantsam-panjakana telo. Amin'ny lafiny teknika, ny birao federaly dia ampahany amin'ny mpanatanteraka, saingy lehibe loatra izany ka mampihena ny sampana roa hafa ary afaka mandresy azy ireo mora foana, toa ahy mandresy ity voromahery ity. 'Marina izany, voromahery.
Mamorona ny lalàko manokana toa ny birao aho. 'Ny lafiny iray mampiahiahy kokoa ny birao ho an'ny olona sasany dia ny tena ataony. Ka andao handeha any amin'ny eritreritra.
Ny birao dia tsy mampihatra ny lalàna fotsiny; manao zava-baovao izy ireo izay antsoina hoe fitsipika. Raha manao izany dia mitondra tena toy ny mpanao lalàna, indrindra satria manan-kery lalàna ny lalàna ary azo saziana ny olona noho ny fanitsakitsahana azy ireo. Ohatra, raha miteny ianao hoe 'Sh% t Sticks' amin'ny fahitalavitra, dia mety hanasazy anao ny FCC, toy ny fampiharana lalàna any an-toerana, raha mandika lalàna mandeha haingana ianao.
Ary aza miteny hoe 'Sh% t Sticks' amin'ny polisy. Saingy araka ny lalàm-panorenana, ny Kongresy no tokony hanao ireo lalàna. Ka raha mpandala ny lalàm-panorenana ianao dia hiteraka fanelingelenana.
Etsy ankilany, ny fizotran'ny lalàna dia ahafahan'ny mpandray anjara mandray anjara mihoatra ny zava-mitranga ao amin'ny kaongresy. Tamin'ny 2014, ny kongresy dia nangataka fampandrenesana mandoa fotoana sy fanamarihana momba ny fitsipiky ny FCC vaovao momba ny tsy fiandaniana. Na iza na iza dia afaka mamaky ireo lalàna naroso, izay tsy mora takarina, ary mandefa fanehoan-kevitra ampahibemaso, ao anatin'izany ny tolo-kevitra momba ny lalàna vaovao amin'ny alàlan'ny Internet.
Mila mamaky ny fanehoan-kevitra ny birao ary mety ho tafiditra ao amin'ny lalàna farany izay havoaka amin'ny kaonty federaly izy ireo. Ka amin'ny lafiny sasany dia demokratika kokoa ny lalàna federaly noho ny lalàna ao amin'ny Kongresy, saingy mbola tsy ao anaty lalàmpanorenana. Ny fahefana ara-pitantanana dia mampipoitra olana mitovy amin'ny fisarahan-kery, saingy tsy olana izy ireo satria ny lalàm-panorenana dia manome zon'ny Kongresy hanangana fitsarana hafa ankoatry ny Fitsarana Tampony, ary tsy milaza izany fa tsy mety ho fitsarana fitantanan-draharaha izay ao anatin'ny biraon'ny birao. Ny biraon'ny birao ambany dia feno amin'ny alàlan'ny fomba fiasa mpiasam-panjakana mifototra amin'ny fanadinana natao hiantohana ny fahaizana avo lenta ary hanala ny politika amin'ny fizotry ny fandraisana mpiasa.
Saingy maro amin'ireo mpitondra birao avo lenta, indrindra ireo sekretera amin'ny kabinetra ary koa masoivoho, no tena manao politika. Ho an'ny iray, notendren'ny mpanao politika izy ireo izay mety miverina mankasitraka na manandrana mandroba ireo masoivoho miaraka amin'ireo tiany mitovy hevitra aminy. Etsy ankilany, ny mpiasa birao dia mifampiraharaha sy miaro ny tombontsoany manokana, izay ataon'ny mpanao politika amin'ny fotoana rehetra.
Misaotra anao miboiboika eritreritra. Ny antony voalohany itazirantsika ny birao dia satria ilaina ny birao. Vitan'izy ireo ny zavatra, na dia mety tsy ho haingana araka izay itiavantsika azy aza izany.
Ary ny sasany amin'ireo zavatra ireo dia zavatra tiantsika hatao, toy ny fizahana ny henanay mba tsy hahazoantsika E. coli na salmonella na aretin'omby adala. Ny valiny iray amin'izany, izay horesahintsika avy eo, dia ny fanesorana ireo biraom-panjakana ary hanome ny andraikiny amin'ireo orinasa tsy miankina.
Misy zavatra holazaina momba an'io. Rehefa dinihina tokoa, amin'ny lafiny maro ny UPS dia mitondra parcel ho antsika tsara noho ny Paositra. Ary manana fahafinaretana bebe kokoa amin'ny alàlan'ny bowling tsy miankina aho noho ny an'ny besinimaro.
Tsy misy ny bowling public. Raha eny dia handeha aho. Afaka maimaim-poana.
Saingy ny adihevitra lehibe momba ny fanaovana privatisation toa lafo. Ary mety tsy ho marina foana izany. Toa tsy azo inoana ny hisian'ny orinasa tsy miankina hijerena hena.
Ary na dia afaka miantehitra amin'ny vidiny aza isika hanamarihana fa ny elatry ny akoho dia tsy misy salmonella, heveriko fa tsy hevitra mety izany. Ny iray amin'ireo antony ananantsika birao marobe dia ny mahasoa sy ny fandraisana andraikitra mety tsy ananan'ny sehatra tsy miankina, fa koa satria ny Kongresy dia mamerina azy ireo hatrany ary manome azy ireo fahefana. Raha tsy nanana birao izahay, ny Kongresista sy ny mpiasan'izy ireo no hiandraikitra ny fanaraha-maso rehetra sy ny fampiharana ny lalàny manokana.
Ankoatry ny famoronana ny olany manokana momba ny fisarahan-kery dia mety somary mikorontana ihany ity raha jerena fa mety hosoloina isaky ny roa taona ny Antenimieram-pirenena. Ny tombony iray amin'ny biraon'ny birao dia ny fahamarinan-toerana iorenan'ny fahalalana miaraka amin'izy ireo. Angamba ny antony lehibe mahatonga antsika tsy manova birao dia satria tena sarotra ny manao izany.
oxalates amin'ny voanjo
Raha vantany vao mamorona birao ny Kaongresy, matetika izy io dia maharitra noho ny antony ara-politika sy ara-politika maro. Handinika ireo antony ireo isika amin'ny manaraka. Hofaranako amin'ny fampahatsiahivana kely momba ny federalisma mifototra amin'ny fanambarana tsy marim-pototra izany.
Miloka aho raha mangataka amin'ny ankamaroan'ny Amerikanina hanome ohatra momba ny birao, hoy izy ireo ny DMV. Ny ankamaroan'ny olona dia hilaza aminao tantara mampihoron-koditra DMV momba ny fotoana niandrasan'izy ireo nandritry ny adiny efatra hanavaozana ny fahazoan-dàlan'izy ireo ary rehefa tonga teo amin'ny mpivarotra dia nilaza taminy ny mpiraki-draharaha iray fa tsy manana taratasy ara-dalàna izy ireo ary mila mandefasa kaonty vola fa tsy carte de crédit na chèque na vola mihitsy ary tokony hiala sasatra ihany izy ireo ary mila miverina ao anatin'ny dimy ambin'ny folo minitra aho ary ny hany tadiaviko dia ny fahazoan-dàlana - AAAAAAH an'ny DMV! ary manana ny fahazoako an'io olana io aho, saingy tsapako fa ilaina ny mampahatsiahy ny olona rehetra niaina an'io traikefa io tao amin'ny DMV fa biraon'ny fanjakana io fa tsy birao federaly. Ny ankamaroan'ny biraon'ny birao mihaona amin'ny fiainanao isan'andro: ny mpampianatra, ny polisy, ny mpanamarin-ketra dia tompon'andraikitra amin'ny governemantam-panjakana fa tsy ny governemanta federaly, toa ny birao Jimmy.
Izay no tanjon'ny Framers. Ka tsara raha manahy ny amin'ny governemanta iza isika no hamindra ny hatezerantsika ary hanoherana ny masinina mety. Izay no atao hoe federalisma.
Misaotra anao nijery. Mandrapihaona amin'ny herinandro ambony. Crash course: Ny governemanta sy ny politika dia novokarina niaraka tamin'ny PBS Digital Studios.
Fanohanana ny fianjeran'ny fianjerana: Avy any Voqal ny governemanta amerikana. Voqal dia manohana ireo fikambanana tsy miankina izay mampiasa teknolojia sy haino aman-jery hampiroborobo ny fahamarinana ara-tsosialy. Hijery misimisy kokoa momba ny iraka sy tetikasan'izy ireo ao amin'ny voqual.org.
Ny Crash Course dia namboarina niaraka tamin'ny fanampian'ireto birao tsy misy fanahy ireto. Misaotra anao nijery.
Inona ny hopitaly fiterahana tsara indrindra any Melbourne?
Ny Royal Womenhopitalydia amalazasafidy eo amin'ireo mpamaky antsika izay nanometerakaEry. Ity vahoaka ityhopitalymanome fikarakarana manokana ho an'ireo marary be risika sy eo an-toerana. Amin'ny maha vehivavy ampahibemaso voalohanyhopitalytany Aostralia (1856), dia nanangana laza matanjaka ho iray amin'ireo izy ireohopitaly fiterahana tsara indrindra.
Ka arahabaina noho ny fitondrana vohoka! Faly izahay fa mandray ny fiterahana sy ny fitaizan-jananao miaraka amin'ireo vehivavy ianao. Hanampy anao hivezivezy amin'ny fampahalalana efa nangonina izahay ary hanome anao vaovao momba ny fikarohana vaovao.
Ny fanabeazana antsika sy ny fahazazantsika dia mifototra amin'ny maodelin'ny fikolokoloana - ekeo, fa ny fahaterahan'ny zaza dia tranga iray mahazatra eo amin'ny fiainana ary ny vehivavy rehetra dia manan-jo hanana ny traikefany manokana. Mino izahay fa izany dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamany, ny fahaizany miaina ary ny fanapahan-kevitra horaisin'izy ireo. Azonao jerena isaky ny fizarana ireo lahatsoratra ireo ary miditra matetika araka izay ilainao.
Amin'ny faran'ny fizarana sasany, dia misy hetsika fohy tokony hosaintsaininao. Amin'ny daty voalohany maha-bevohoka anao dia tsy tokony ho nahazo ilay boky hoe 'Manan-janaka am-behivavy' ianao. Ity boky ity, miaraka amin'ireo lahatsoratra ireo, ary koa ny rohy mankany amin'ny loharano hafa sy ny takelaka misy eo amin'ny tranonkalantsika, dia hanome anao fampahalalana mahasoa be dia be.
Raha manana fanontaniana ianao, dia afaka mifampiresaka amin'ny mpampivelona na mandritra ny fotoana nanendrenao anay, na manatona dokotera amin'ny fianakavianao, na mifandraisa amin'ny ekipan'ny fiterahana. Tsarovy fa amin'ny maha marary anao dia manana zonao sy andraikitra ianao ary manaja sy mamporisika ny fandraisanao anjara amin'ny fikarakaranao ny vehivavy, ary ny fampitana ny eritreritrao sy ny filanao amin'ny vadinao na ny mpikarakara sy ny ekipan'ny fikarakaranao dia dingana iray ihany. Mandritra ireo fizarana ireo dia indraindray miresaka ilay bevohoka na olona teraka ho vehivavy bevohoka na teraka isika.
Fantatsika fa tsy ny olona rehetra no mamantatra izany ary manaja sy manohana ny fahamendrehana, ny lanja, ny toetra tsy manam-paharoa ary ny zon'olombelona izahay. Izay manohana vehivavy miasa, raha tsy hoe matihanina amin'ny fahasalamana dia antsoina hoe mpiara-miasa na mpanohana. Hiresaka bebe kokoa momba ny asa sy ny fandefasana izahay amin'ny lahatsoratra ho avy, saingy zava-dehibe ny hahafantarana hoe rahoviana no hifandray amin'ny hopitaly sy aiza no hahatongavanao, na ho tonga amin'ny fotoana fanatrehanao toeram-pitsaboana ianao na ho avy eto mba haterana Tsara kokoa ny mitady mivoaka mialoha ny toerana handehanana any amin'ny hopitaly mba tsy hampihenjana ny andro.
Ny fidirana amin'ny tobim-piantsonanay sy ny tobin'ny vonjy taitra dia avy amin'ny Flemington Road, izay azo idirana na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana. Misy ihany koa ny helodratran'ny taxi ao amin'ny Flemington Road sy ny lalana Grattan manoloana ny hopitaly. Bisy sy kamio maromaro isan-karazany no manompo anay, koa fitsidiho Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fomba hahatongavana eto amin'ny fitateram-bahoaka dia tsidiho ny tranokala PTV.
Raha tonga amin'ny daty nifanarahana ianao dia mila mifandray amin'ilay toerana voalaza ao amin'ny fampahalalana momba ny fanendrena anao raha very ianao, aza manahy fa misy fanampiana. Azonao atao ny miditra ao amin'ny birao fampahalalana anay na ny birao an-tsitrapo amin'ny rihana ambany. Raha marary manan-janaka amin'ny toeram-pialofana ho an'ny vehivavy ianao ary miasa na mandeha manao asa fampidirana asa na fizarana caesarean dia mila manatrika ny sampana vonjy maika ho an'ny vehivavy ianao.
Misy toerana fijanonana vonjy maika vetivety ivelan'ny serivisy vonjy taitra ho an'ny vehivavy. Afaka mijanona eto mandritra ny 30 minitra ianao, fa afaka mandoa onitra mihoatra noho izany. Raha tsy misy seza misy, ny namanao na ny namanao dia afaka mijanona eo amin'ny tsipika fotsy mba hampidina anao.
Azo aleha amin'ny lalana Flemington ihany koa ny fiantsonan'ny vehivavy mandray karama ambanin'ny tany. Ny fidirana amin'ny fikarakarana vonjy maika ho an'ny vehivavy dia misokatra isan'andro. Raha mila izany ianao sy ny olon-tianao na ny hiverina, dia tsy olana izany.
Raha vantany vao tonga eo amin'ny toeram-pialofana ho an'ny vehivavy ianao, dia hositranin'ny mpampivelona ao amin'ny foibem-panombanana, izay hita eo amin'ny foibem-piterahana amin'ny haavo 3. Raha tsy miasa ianao, na raha sahirana ianao, dia mety manoro hevitra anao hody amin'izay fotoana izay. Ny fikarohana dia milaza amintsika fa ny vehivavy dia manao zavatra tsara lavitra any an-tranony any am-piandohana, fa rehefa mandroso ny asanao dia hiditra ao amin'ny foibe fiterahana ianao.
Raha mila fanazavana fanampiny, anontanio ny mpiasanay amin'ny fotoana fanendrena anao manaraka ao amin'ny tobim-pahasalamana. Raha miteraka ao amin'ny Hopitaly Sandringham ianao dia tsy maintsy maneno lakolosy aloha. Azonao atao ny miditra eo anelanelan'ny 8:00 maraina ka hatramin'ny 8:00 alina. amin'ny alàlan'ny faritra fidirana lehibe ary eo anelanelan'ny 8:00 alina. ary tamin'ny 8:00 maraina tamin'ny alàlan'ny faritra vonjy taitra.
Ahoana no ahatongavanao any amin'ny Frances Perry House?
Frances Perry Housedia eo amin'ny zoron'ny Flemington Road sy ny Grattan Street any Parkville (Melways 2B, A7). Ny fidirana seza misy kodiarana dia azo jerena eo amin'ny vavahady fidirana voalohany (Grattan Street) sy ny fidirana vonjy maika (Flemington Rd).
Hey Fotoana kely izao. Ny sakaizan'i Gabby, Cakey, dia ao an-dakozia foana, mahandro sakafo mahasalama. Voalohany dia manao ny gorodon'ny takelaka aho.
Manaraka izany, ataoko ny rindrin'ny efitrano. Cakey fitiavana hafafiny. Cakey manana volo nania sy valiha miparitaka.
Rehefa tena faly i Cakey na tena malahelo dia fety fanaparitahana izany. Misy varavarankely kely eo ambonin'ilay fitoeran-drano, ampio ny ridao miparitaka, ary fety fanaparitahana izao! Mpinamana kilalao malemy paika Pandy tia mikotroka. Ary eo amin'ny kaontera, Gabby sy Pandy no manendasa miaraka amin'i Cakey! Tongotra be ity lakozia ity, na ny bokotra eo am-baravarana aza misy sofina saka! Manana fangaro matsiro be dia be izy ireo ka mila habaka mifanohitra be.
Tian'i Cakey ny mitazona lakozia madio, ary na dia tsy mahandro aza izy ireo dia fotoana filalaovana foana izany, indrindra rehefa tonga hitsidika ireo zanak'alika hamster. Avy eo mazava ho azy fa mila manao ny hilentika isika. Gabby sy ny namany dia tia mipetraka eo ambony latabatra ary misakafo Raha mijery akaiky ianao, dia ho hitanao ny seza cupcake manodidina ny latabatra, ka manaova ondana frosting amin'ny fatana mofomamy kely efatra.
Tsy ny fatin-kapoaka ihany no fanaka matsiro ao an-dakozia. Ny latabatra dia toy ny goba gilasy volom-boasary raha mahandro sakafo maivana. Ary aiza no ahitan'i Cakey ny akora rehetra ao anatiny? Ny vata fampangatsiahana, mazava ho azy.
Ary toy ny ankamaroan'ny zavatra ao amin'ny trano saribakolin'i Gabby, manan-tsofina saka izy. Ary mba hahatonga azy io ho purring kokoa, tarehy saka. Fantatrao ve fa inona koa ny ao an-dakozia manana endrika saka? Ilay mpanala Eo ambaniny mazava ho azy ny fatana sy ny lafaoro.
Misy ihany koa ny antsipirian'ny saka mahafatifaty isan-karazany. Saika vita ny lakozia. Saingy ho loza izany raha toa ka tafiditra ao ny famafana.
Mihantona amin'ny rindrina ny fitaovan'ny lakozia ilaina rehetra. Aleo isika manamboatra lapoaly. Tsy ho feno ny lakozia raha tsy misy spatula zanak'ondry manokana an'i Cakey.
Cakey mampiasa fonon-tànana ao anaty lafaoro mba hisintonana fitsaboana mamy avy ao anaty lafaoro. Fa mampiasa azy ireo i Pandy mba hisamborana toa ny fanontana lamba nataon'i Cakey ihany! Aleo ahantona fotsiny ity, ary dia izay. Lavorary tanteraka ity lakozia ity! Manana lakozia ho ahy aho izao izay mitovy amin'ny ao amin'ny trano fanaovana saribakolin'i Gabby.
Amin'ny manaraka dia esory izany mba hahafahako manangana efitrano bebe kokoa amin'ny trano fanaovana saribakolin'i Gabby. Veloma!
Ohatrinona ny vidin'i Frances Perry?
Ny serivisy fanampiana an-tratra dia $ 75.00 avy amin'ny paosy isaky ny consultation. Raha ianaoAzatsy manana Karatra Medicare, ny Program Fantatra ny mpampivelona ao am-paosyvidin'nydia $ 279.65, ary ny Antenatal Consultations dia $ 46,80.
Tsy takona afenina fa tsy misy olona roa eto an-tany mitovy! Rariny raha milaza fa mizara fitoviana maro ny tsirairay - ny fomba ananantsika rehetra sandry, tongotra, maso ary sofina roa. Saingy amin'ireo olona fito sy sasany lavitrisa eto an-tany dia misy olona tena vitsy dia vitsy. Ity dia singa iray ara-batana tena mampiavaka azy ireo satria saika tsy misy olon-kafa eto an-tany manana azy ireo.
Vonona ny hahita ireo olona tsy mahazatra indrindra eto an-tany? Andao hanomboka! GARY TURNER Ity i Gary Turner, fa ny ankamaroan'ny olona mahalala azy amin'ny anarana hafa: Elastic Man. Nametraka ny Guinness World Record ho an'ny hoditra matevina indrindra tamin'ny taona 1999 izy ary tsy nisy olona nikapoka azy hatrizay. Mety tsy dia mahazo aina ny zava-bitany, fa raha ny marina dia azony atao ny manenjana ny hodiny tsy misy fanaintainana.
Izany rehetra izany dia vokatry ny tranga mahery vaika tao amin'ny syndrome Ehlers-Danlos, aretina iray azo avy amin'ny fototarazo izay misy fiantraikany amin'ny ligamenta, taova anatiny ary, mazava ho azy, ny hoditra. Vokatr'izany dia marefo ny hodiny satria c ollagen tsy tomombana, saingy tsy misy olana: ny ratra amin'ny hodiny dia elaela vao sitrana ary voatery nijanona tsy nilalao baolina kitra izy noho izany. Saingy tsy dia olana loatra io andro io ary araraotiny ny hodiny elastika amin'ny alàlan'ny asany amin'ny maha mpilalao mpanohana azy.
RODRÍGUEZ HERNANDEZ Fantatrao ve izay lazain'ny olona momba ny tongotra lehibe? Kiraro tsara! Fa tena lehibe inona marina? Eny, i Rodríguez Hernandez avy any Venezoela dia manana ny rakitsoratry ny tongotra avo indrindra an'ny olona velona rehetra manana ny haben'ny kiraro 16 santimetatra sy ny refin'ny kiraro 26! Tsy hahataitra olona izany fa sahirana izy ireo mahita ny kiraro mety, satria ny ankamaroan'ny fivarotana kiraro ara-barotra dia mivarotra kiraro hatramin'ny habe 14. Ka tamin'ny naha-zatovo azy dia matetika izy no tsy nikiraro ary nampijalian'ny ankizy hafa ny haben'ny azy tongotra, izay ny haben'ny tongony noho ny fihary pituitary be loatra izay mamokatra hormonina maniry be loatra. Ny tongony raha ny marina dia lehibe kokoa noho ny tongotr'ilay lehilahy avo indrindra eto an-tany! Ny laza malaza any Guinness dia midika fa ny olona dia liana kokoa amin'ny fanjairana kiraro mifanaraka amin'ny tongony.
Heveriko fa ny tantara rehetra dia misy fiafarana mahafaly. DEVENDRA SUTHAR Ny ankamaroantsika dia nianatra nanisa ny rantsan-tanantsika sy ny rantsantanana indraindray, fa i Devendra Suthar dia mety ho very hevitra raha nanandrana izany satria 28 ny rantsan-tànany sy ny rantsan-tànany fa tsy ny 20. Rantsan-tànana roa fanampiny io amin'ny tanana tsirairay ary rantsan-tongotra roa fanampiny amin'ny tongotra tsirairay.
matory eo am-pandriana
Na dia tsy fahita firy aza ny fananana fanampiny iray na roa, dia tsy fahita firy ny endrika polydactylism manokana; tsy fahita firy, raha ny tena izy, mitazona ny Guinness World Record ho an'ny rantsan-tànana sy rantsantongotra betsaka indrindra eto an-tany, koa inona no olona manana rantsantanana fanampiny hivelomana? Mpandrafitra izy. Toa tsy fahendrena ho an'ny olona manana rantsantanana fanampiny ny misafidy asa iray izay olona tsy manana afa-tsy rantsantanana 10 manapaka iray ny iray matetika ary nilaza izy fa mila mitandrina bebe kokoa, saingy ny fifantohana Manantena fanampiny dia hahatonga azy ho tena mahay amin'ny varotra mpandrafitra. MATTHIAS SCHLITTE Tsaroan'ny tsirairay ny hozatry ny tanany popeye nikapoka ny adala sasany.
Ny filokana dia tsy nampoizinao mihitsy ny hahita olona manana sandry tena toa an'io, fa izao dia afaka. Matthias Hellboy Schlitte dia manana kileman-toetra tsy fahita firy izay mahatonga ny taolana amin'ny sandriny ankavanana 33% lehibe kokoa noho ny sandriny havia mahazatra. Mazava ho azy, ny tanjaky ny firenena rehetra dia manana ny tanjony, ka tsy mahagaga raha fantany fa iray taona mahery i Matthias dia mpanao tolona mahery sy mahomby.
Fa raha ny tena izy dia nihomehy an'ireo matihanina hafa izy tamin'ny voalohany satria te hiditra amin'ny fanatanjahantena satria tsy mitovy lanja amin'ny mpikatroka sandry tsotra akory izy. Ny tsy fantatr'izy ireo dia ny tànan'ny tolona ny ankamaroan'ny lanjany ary ny ankamaroan'ny mpifaninana aminy dia tsy nahazo vintana hanohitra azy mihitsy. JEFF DABE Angamba ny tena mahasoa indrindra amin'ireo toetra tsy mahazatra rehetra ao amin'ity lisitra ity dia an'i Jeff Dabe.
Manana tànana lehibe tokoa izy, Raha ny tena izy, lehibe koa ny sandriny - mety ho tanana lehibe toy izany no tokony hataony. Nandresy ianao Aza gaga raha mahita fa mpiady totohondry mahery amin'ny onal ianao - mazava ho azy fa ho very maina raha tsy nanao izany izy. Tokony hampiasa ny tanany sy ny sorony amin'ny haben'ny basikety amin'ny boribory 19-inch izy hampiasaina amin'ny fomba hafa, na dia manao izany aza ny sandriny havia amin'ny ratra taloha.
Mety manontany tena ianao hoe inona ny aretina nahatonga ny rantsany goavambe, ary misy valiny mahaliana momba izany: tsy misy. Vao teraka toy izany izy, niaraka tamin'ny sandry sy tànana lehibe niara-nitombo taminy, izay natao ho malaza fotsiny. JYOTI KISANJI AMGE Ity i Jyoti Kisanji Amge, avy any India izy ary vehivavy velona fohy indrindra eto an-tany.
Fantatra voalohany fa tsy nitombo toy ny zaza mahazatra izy tamin'ny faha-5 taonany, endrika tsy fahita firy amin'ny dwarfism fantatra amin'ny hoe achondroplasia, izay midika fa tsy hitombo mihoatra ny habe iray izy. Tamin'ny faha-15 taonany dia nahazo ny World Guinness World Record voalohany izy ho tovovavy fohy indrindra velona ary tena bitika izy! Tamin'ity fotoana ity dia 9 kilao fotsiny no lanjany mavesatra noho izy tamin'ny fotoana nahaterahany. Izy izao dia manana ny Guinness World Record faharoa ho an'ny vehivavy fohy indrindra velona, ​​mirefy 2 metatra sy 0.7 santimetatra fotsiny.
Tsy mora foana ny fiainany ary ny fitafiany rehetra, ny kirarony ary na ny lovia sy ny lambam-pandriana aza dia tsy maintsy namboarina manokana ho azy, saingy nahatanteraka ny nofinofiny ihany koa ny fahafahany mivezivezy sy lasa anarana an-trano. SULTAN KÖSEN Ny tongotr'i Sultan Kosen no izy irery no voadona tamin'ny zavatra lehibe kokoa: ny olona avo indrindra dia vitsy ny mpifanandrina aminy; Izy dia iray amin'ireo lehilahy 10 amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona rehetra izay mahatoky mihoatra ny valo metatra ny halavany. Valo metatra ny halavany, saingy tsy manambola mihoatra ny olon-drehetra foana izy - tsy nanomboka ny fitomboan'ny fitomboany tsy mahazatra izy mandra-pahatongany 10 taona.
Vokatry ny fivontosana tao amin'ny fihary pituité izay namokatra hormonina fitomboana be loatra, saingy soa ihany fa ny lazan'ny fitantarana an'izao tontolo izao an'i Guinness dia midika fa nomen'ny mpandidy azy ny fandidiana mamonjy aina ilainy hamongorana tanteraka ilay fivontosana maimaimpoana. Ary tsy izay ihany no nahafaly azy: nahatanteraka ny nofinofiny ho tia sy hanambady ihany koa izy, ary afaka mahazo akanjo mifanaraka aminy tsara ihany amin'ny farany. ADRIANNE LEWIS Mieritreritra aho fa saika ny olona rehetra dia nahita ny lela naseho nandritra ny fotoana ela, saingy tsy misy amin'ireo mpiangaly fampisehoana ireo afaka mandresy an'i Adrianne Lewis.
Mihevitra izy fa manana ny lela lava indrindra eto an-tany, ary mety marina ny lazainy - mirefy 4 santimetatra izy! Mandra-pahoviana marina izany? Eny, ny fantsony YouTube dia misy ohatra maro amin'ireo zavatra mahavariana azony atao amin'izany; afaka milelaka ny saokany, ny orony ary ny kiho izy - ny tiako hampahatsiahivina anao dia heverina fa tsy ho vita mihitsy. Fanampin'izay, izy koa afaka milelaka ny masony toa ny sakamalao! Ary aza adino ny halavan'ny lelany! Lava loatra ny lelany ka nampiasainy tany amin'ny sekoly fanabeazana fototra mba hampitahorana ireo mpampijaly amin'ny alàlan'ny fivoahana. Toa tsy misy antony mahatonga ny halavany tsy ara-dalàna, ka inoako fa tsara vintana fotsiny izany.
BYRON SCHLENKER Efa nasehonay anao ny lela lava indrindra, saingy manana fomba maro handrefesana zavatra i Guinness. Tsy manana ny lela lava indrindra i Byron Schlenker, fa izy no manana ny malalaka indrindra. Tsy noeritreretiko mihitsy hoe hahagaga ity, saingy talohan'ny nahitako azy.
Mahatalanjona 3,37 santimetatra ny velarany! nahita an'io endri-javatra tsy manam-paharoa io raha namaky ny boky Guinness of Records hanampiana ny zanany vavy amin'ny tetik'asa iray any an-tsekoly - hitany fa 3,1 santimetatra ny rakitsoratra teo aloha ary azony antoka fa maharesy azy io izy.
Marina ny azy, ary tsy ela taorian'ny nangalariny ny anaram-boninahitra. Fa tadidinao ve ny zanany vavy izay nanampy tamin'ny tetikasan'ny sekoly? Izy ilay paoma izay tsy nianjera lavitra tamin'ny hazo. Raha ny fantatra dia izy no manana ny lela malalaka indrindra eto an-tany ho an'ny vehivavy, ary amin'ny 2,89 santimetatra dia sahala amin'ny mahavariana azy toa an-drainy.
ISAAC JOHNSON Minnesota Isaac Johnson dia toy ny zatovo antonony mandra-panokafana ny vavany.
Izy no manana ny Guinness World Record ho an'ny vavahady lehibe indrindra, ary amin'izany, tsy manao vazivazy izy ireo manokatra ny vavanao ho be dia be. Andao lazaina fa mijery horonantsary nohatsarain'ny CGI ry zareo. Hatraiza tokoa ny sakany? 3,67 santimetatra! Mahereza, makà mpanapaka iray ary zahao hoe hatraiza ny vavanao misokatra raha ampitahaina: manome toky aho fa tsy misy na aiza na aiza akaikin'io lehibe io.
Tsy azoko antoka hoe ilaina inona io, fa azoko antoka fa manao zavatra izany mba hamenoana ny filan'ny zazalahy tanora. Ary raha tsy mahomby izany dia angamba tokony ho hitany raha afaka mahazo asa amin'ny sarimihetsika izy, milalao IT na koa Jaws.
Taiza no niainan'i Frances Perry tamin'ny androny lehibe?
Frances Perry. Frances Mary Perry MBE VMH (19 Febroary 1907 - 11 Oktobra 1993) dia zaridaina, mpitantana, mpanoratra ary fampielezam-peo. Teraka tamin'i Frances Everett tao Enfield, Middlesex izy, izay toerana niainany ny ankamaroan'ny fiainany tao Bulls Cross.
Iza no boky tsara indrindra nataon'i Frances Perry?
Boky nosoratan'i Frances Perry Herbaceous Border (1949) Colour in the Garden (1951) The Woman Gardener (1955) Collins Guide to Border Plants (1957) Flowering Bulbs, Corms and Tubers (1966) Flowers of the World (miaraka amin'ny RHS) (1972) Zavamaniry tropikaly sy zavamaniry ambanin'ny tropika (miaraka amin'i Roy Hay)
Iza ireo mpampivelona ao amin'ny Frances Perry House?
Ireo kilasy dia ampiasain'ny klinika manam-pahaizana manokana. Ny maha mpampivelona dia asa tena manokana ary tianay ny mpampivelona anay ao amin'ny Frances Perry House any Melbourne - eto dia milaza aminay ny zavatra tian'izy ireo momba ny mpampivelona sy ny toro-hevitra mety hananan'izy ireo ho an'ny maman-dreny vaovao ny ekipa mahafinaritra.